Vakafa vekurwiswa muUtrecht vanoratidza kuti haikwanisi kuva PsyOp? : Martin Vrijland
Vakafa vekurwiswa muUtrecht vanoratidza kuti haikwanisi kuva PsyOp?
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 19 March 2019	• 32 Comments
Kunyange zvazvo zvinhu zvose zvinoratidzika seve nguva yakagadzikana PsyOp (kushanda kwepfungwa) pano, zuva rakatangira sarudzo, pane nyaya dzinogutsa pamusoro pekufa kwechokwadi. Unonzwa kupi uye unoona nyaya idzodzo? Kurudyi: munhau. Uye zvechokwadi iwewo unoona pane zvemashoko ezvehuwandu i "nhoroondo chaiye" neshamwari chaiyo nemhuri dzinodzivirira kuti dzinoziva ivo vakaurayiwa nehama dzavo. Zvechokwadi iwe unotofanira kuzvisarudzira iwe pachako kana iwe unotenda mukurwisa kwakadaro kana kwete, asi ini ndinoramba ndichiratidza zvinhu uye mikana iyo hurumende nemasangano vane mumaoko avo kutamba nevanhu. Vanogona kugadzira mapurogiramu ezvehuwandu hwemagariro evanhu kunze kwebhuruu (asi neine unhu hwechokwadi). Uye saka iwe haugoni kutaura zvakare nechokwadi kana avo vanopindura ku Facebook yako post nemashoko akaita se "Ichokwadi chaicho nokuti ndivo vavakidzani vangu"Kana kuti"Ndinoziva murume uyo nokuti mwanakomana wangu ari kuchikoro ikoko"(Uye zvichingodaro) ndezvevanhu chaivo. Uye isuwo tinewo huru network ye Inoffizieller Mitarbeiter iyo inodha mbambo yeupupuri kana ichidiwa.
Mharidzo inofanirwa kunyatsopararira mutambo weparapaganda wehurumende uye inokuratidza iwe vanhu nemifananidzo zvavanogona (uye vanoda) kukuratidza kuti utungamirire maonero ako enyika. Kubva mumagariro evanhu tine (kuburikidza nemitambo yakadaro) pfungwa yokuti kune mauto ese eRussia troll anokonzera mafungiro pa Facebook ne Twitter ane mazano asina kunaka, asi kuti izvi zvinokonzerwa nehurongwa hwakarongeka zvinoitikawo saizvozvo, chokwadi, inorambidzwa. Zvechokwadi, iwe unogona zvechokwadi kutaura kuti nzira dzose dzehutuku huripo kuti dzigadzire zvinhu zvose muchitarisiko uye dzinoona kutonga kwekuona kuburikidza nevose vhidhiyo uye vhidhiyo yehupfumi kusvika kune zvinyorwa zvakanakisisa. Izvo zvinogona zvakare kuti PsyOp inoshanda chete nevanhu vanopesana. Izvi zvinogona kushanda kune vose vanoita zvakaipa nevatambudzi (uye zvapupu). Ikoko bhagi rebhadha rinofanira kutora dzimwe nguva, nokuti iwe unofanirwa kupa vanhu chizivo chitsva uye kuvapo kune imwe nyika iri kure kana zvichidiwa. Zvisinei, kukosha uye kukanganisa kwemabasa akadaro kwakakura uye saka unogona kutarisira kuti inogona kutora zvishoma. Mushure mezvose, ndezvekugadziriswa kusingabvumirwi kwemapurisa enyika maitiro anogona kushandiswa kudzora mamiriyoni.
Zvisinei, patinoona mifananidzo yehama dzinoshungurudzika kana hama, manzwiro anokurumidza kutora uye tinosarudza kukanda pfungwa yokuti kune PsyOp mumarara zvachose. Iwe une chikomborero changu, asi ndinofunga kuti zvakakosha kuziva kuti zvepamusoro uye mune zvemari hapana chinhu chinomira munzira yekutamba nemashoko makuru fake kuburikidza nemigwagwa yakawanda. Mushure mezvose, inobva pakubhadhara.
Yaiva, chero ipi zvayo, inoshamisa kuti pakanga paine hurukuro yehurumende yevatungamiri venyika uye vazhinji vavo vakangogara pamba. Nzvimbo yekurwisa kwaivewo inoshamisa, nokuti yakanga iri kona chaiyo (nei usingasarudze guta iri pakati?). Uyezve, zvinokonzerwa nekukwanisa kuitika pazuva rekutsvaga hazvirevi kutarisirwa kunge rakakura sekuti iwe wakasarudza zuva rekushanda rinoshanda uye nzvimbo yakabatikana. Nhau dzezvapupu hazvinyatsonzwisisiki, dzichiita pfungwa yokuti hazvisati dzakanyanya, asi chii chaiitika? Mukadzi wacho akabatwa kubva padanda uye zvino vakaona mukadzi akarara ipapo? Saizvozvowo Gökmen Tanis akapfura nepahwindo kubva paTram? Uyo anonzwa plop plop plop (runyararo) uye imwe yakanzwa pang pang pang (kwete damper). Saka iwe unopfura mumwe kubva paitima; saka kushambadzira kwekukurumidzira kunobviswa (kana tram driver drives), asi mukadzi wacho akanga atova pedyo (kana kumashure?) tram uye ipapo munhu wese anoenda panze uye Gökmen anotanga kupfura zvakare? Mudzimai iyeye akabuda sei muTram? Uye nei aizofamba kunze kwetami mukati me24 Oktoberplein? Kana kuti akazununguka kunze apo masuo akanga achiri kuvharwa? Kana kuti Tanis akamutema kunze kwetami uye ndokupinda (apo masuo akanga akavharwa uye tram yakanga ichimhanya) ndokuzobuda zvakare? Simba (kana risingaitiki) uye nenyaya isina kujeka, haufungi?
Chapupu Dhanieri Molenaar anoita basa rinokosha zvikuru munyaya iyi. Nenzira, nei pane masangano 2 chete munhau? Zvechokwadi tram (pamotokari inotakura vanhu zuva) yaive nevakatakura vakawanda vakaona chimwe chinhu? Daniel Molenaar isupupuri hunonakidza zvikuru. Akatevera nzira paYunivhesiti yeUtrecht uye kwete kungodzidza. Akadzidza New Media uye Digital Culture. Saka anofanira kunge achiziva zvakakosha nezvekuti iwe deep fakes vanogona kuita, asi izvozvo kunze. Yunivhesiti yeUtrecht ndiyo nhare yeProf. dr. dr. Beatrice de Graaf (zita rakanaka renzira). Muna 2004 akawana PhD yake paYunivhesiti yeUtrecht pamusoro pehurukuro pamusoro peGDR, iyo inonakidza zvikuru, nokuti iyi ndiyo nguva yeN Inoffizieller Mitarbeiter. Vanhu vechokwadi vanoita basa reviri kune yeEast Germany basa rakavanzika. Pfungwa yokuti izvi hazvisi kuitika muNetherlands uye kuti ichi chiitiko chakanyangarika zvachose ndicho chinonyanya kukosha chatinofanira kupedza.
Imwe uchapupu mukomana anonzi Nicky van Grinsven. Uchapupu uhwu hungaita kuti 'Allah Akbar' nhau. Akanzwa izvi Gökmen Tanis anoti (kusiyana naDaniel Molenaar). Tanis anofanira kunge akange ari mhirizhonga akaipa kuti awane Nicky pamamita 15 (aone nyaya yake pa Nieuwsuur). Kana iwe uri kupfura, ita zvakanaka, iwe ungati. Asi nhau dze Allah Akbar chikafu chakanaka chekuvhiringidza "Izvo zvinotyisa ikozvino kana kuti kwete uye zvichida inopenga ye-jihadist here?". Uye iyo ndiyo chikafu chakanaka chokusimudzira kuruboshwe zvichienderana nekwesimba kumanikidza mune zvematongerwo enyika (uye makwai) vanoramba vachivhota pane tariro yenhema yemapoka avo vangave vachiri kumiririra panguva ino).
Tinogona kutaura nechokwadi kuti kurwiswa kwakadaro kunosimbisa kudiwa kwemagandanga. Zvimwe zvishandiso zvitsva zvakare zvakatangwa, zvakadai sekuisa mifananidzo yefoni kumunda wemapurisa (uye kwete kumashiviro ehurumende; verenga 'censorship'), kuiswa kwekbenveilig.nl uye Facebook kuchengetedza check button iyo iwe unogona kuita kuti shamwari dzako dzizive muna 1x kuti iwe uchiri mupenyu (verenga 'makuru data'). Kwenguva yokutanga, mapurisa akashandisa drones kutsvaga mutadzi uye hurumende yakakwanisa kuongorora kuti vagari vakaramba vari mukati sei mushure mekudanwa nekushandiswa kwehutano hwe5. Mumakore achangobva kupfuura, vanhu vave vakajaira kutyisidzira magwaro kuburikidza nemamiriro emamiriro ekunze (code yellow, code red, etc.) uye iye zvino ne "kutya kwechokwadi".
Munguva iyi, nharo dzakabuda kuti pane chikonzero chekufunga nezvekutya, nokuti hama yaGökmen inogona kushamwaridzana nemunhu anokanganisa Caliphate club kubva kuTurkey (ona pano). Izvozvo ndezvokuti kuchengetedza kukanganiswa uye kuchengetedza mukova wakazaruka kune kutya. Iko Gökmen hapana hukama pamwe neavo vanotambudzwa, panewo imwe nharo yekutya kwekutyisidzira (asi nei zvakakonzerwa neHNUMUM munhu kurwisa?). Mukuwedzera, pane (ino nguva isina pasipoti) nyora inowanika mu Renault Clio iyo Gökmen angadai akashandisa kurega. Quote RTL Nieuws: Muchikamu chekundu Renault Clio apo mukuru anonzi Gökmen T. akashandisa mushure mekurwiswa, nheyo yakawanikwa yakaratidza izvi, inoparidzira Public Prosecution Service. "Mamiriro ezvinhu echokwadi" aizoratidza zvakare kuti. Gökmen aive akafirwa ne coke uye akanganwa kutora chinyorwa chinokosha naye mukutambudzika. Tichaona izvo zvakaitwa zvei zvakare. Zvechokwadi isu tinewo nyaya yemusikana anonzwisisa Gökmen sekiki snorer uyewo zvakare kuparidzirwa Pauw & Jinek akaratidza zuro mufananidzo wemurume asingatauriki asingambofungiri uyo akashandisa mishonga yakawanda uye doro. Uye saka mhirizhonga yese inoparadzaniswa kubva pane zvakakunakira kugadzirisa pamusoro pekunge kana kuti kusavhundusa, nepo masangano akave akaongororwa kwezuva uye kushandiswa kwehurumende yemapurisa zvakare kwakabviswa mukati maro.
Source chinyorwa listings: ad.nl, rtlnieuws.nl, ad.nl, uu.nl, nhamba.nl, nos.nl, volkskrant.nl, bright.nl, geenstijl.nl, herhaling.nl
Terrorist kurwisa 24 Oktoberplein muUtrecht, inotyisa munyika yose!
Anopomerwa mutadzi Gökmen Tanis akasungwa, zvichida mutambo wemhuri
Mason Wells inopona 3 kutambudzwa kwegandanga uye inotaura kwekutanga
Iko Brenton Harrison Tarrant inorwisa kutanga kwebato rakanaka rekurwisana neTurkey here?
Nyaya dzepamusoro dzakave dziri nhau dzisina kururama kwemakumi emakore, asi isu tashandiswa kwazvo kuti tisazviziva
Tags: 24, kurwisa, Daniel Molenaar, Doden, dhurama, chaizvoizvo, Featured, akakuvara, Gökmen Tanis, Nicky van Grinsven, October makirati, ukama, victims, kutya, ugandanga, Utrecht
Zvakanaka kuti iwe uri pamusoro payo. Bvisa varanda kunze kwekutadza kwavo. Zvichava zvakaoma kunyange zvakadaro. Icho chave chazivikanwa here kuti gweta iri munyaya iyi? Gweta ane hukama hwakanaka neHurumende? Ndiani anowanzobatanidzwa? Inobhadhara kuva shamwari nesangano.
Ndinogona kunge ndichitumidza kuti media hypnosis. Vanhu vane hypnosis ye-hypnosis device iyo chaiyo inovaisa pasi pe hypnosis nemafungiro nemifananidzo (umo mushure mokufamba uye nzira inokosha). Nokudaro kusvetuka shure nekunze nemashoko ekutyisidzira kana matambudziko ehama, etcetera. Nokudaro mitsindo inotenderera kune nhau dzeNOS uye kumashure nekunze kwepepanhau uye weatherman / mukadzi.
Iwe unoudza sei vanhu pasi pekunyengedzwa kuti vari kudya muteu unovava pavanenge vati "hypnotist" inovaudza kuti inonaka inopisa mango? NaRazti Rostelli, izvi ndezvese zvinonakidza, asi vashomanana vanoziva muupenyu hwehupenyu hwokuti isu tiri hypnosis uye tinorongwa muhupenyu chaihwo.
Ichokwadi, Milton Erickson, nyanzvi piyona mu hypnosis, ave achishanda zvakaoma pane izvozvo. Kupfurikidza nekuziva kwekutaura nekutaura kusingazivi. Izvi zvakagadziridzwa zvakare neTavistock uye zvekare zvinoshandiswa nevanowanzofungidzirwa kuti vaite mamiriro evanhu, kune injinjini yevanhu (brainwash) nevanofunga nezvepfungwa, mafungiro anofungidzira ari kushanda pamasangano akasiyana-siyana, nezvimwewo.
Ingongokurukurei izvi pane rekhofi, panzvimbo yekutya kana nyaya dzemhuri (iwe hauzive)
Icho chokwadi chokuti Vimeo chiteshi chakavharwa pane nzvimbo yakazvimiririra yakawanda muNetherlands inoratidza kuti kudzvinyirira kunenge kuridza.
Vhidhiyo yakawanda zvikuru kubva kune dzimwe nzvimbo uye mifananidzo yakaipa iri paVimeo uye rega tisatotauri nezvemasayenzi epa funzige, ayo anogona kuramba ari makirasi.
Vose vanogara paIndaneti mitsara yose ine mafirimu akadai akaita kuti uropi hwako hurware. Dzimwe nguva zvinotyisa zvevana ...
The Vimeo channel yeHeer Vrijland yakabviswa kubva paItaneti vhiki ino, pasina kunyeverwa sezvo iye pachake akaratidza munyaya yapfuura.
Izvo zvinopfuura kungoratidza kuti tiri kurarama kudzvinyiriri kudzvinyirira.
Vatapi venhau vane simba vanofanira kusarudzwa zvakare kamwechete (nokuti pane mapoka ezvematongerwo enyika ezvepepiti) vhotera maapuro akaora kubva kuMedaland uye ngatitorei sarudzo pamusoro peiyo, nokuti zvasvika, isu zvino tinoziva kuti zvematongerwe enyika (maitirwo emitambo) ) paws kusvika kuJinek Pauw uye neNieuwkerkjes inoratidza, De Media inosuka ubongo hwedu.
Vanokwanisa kuratidzira mafirimu anochera ropa pane TV uye internet
Asi Ishe Vrijland's Vimeo channel inoparadzwa zvachose pasina chiziviso, inofanirwa nenyika yezvematongerwo enyika, UNGANOTAURA
Iberi akanyora kuti:
Basa iri rakaoma kwazvo muUtrecht rinobatanidzwa nekushanda muNew Zealand. Saka ini ndinotarisira kushanda kwakafanana nekuwedzera, zvikuru kuMadokero, mumhanyi-kusvika ku2023 mumakore anotevera. Vhepfenyuro vachaita kuti hupenyu huri kuramba huchirwisana neTurkey.
Uye voila! Uye chiputi ichi chinobve kupi? Chii chokuzvidza chakanga chiri .. https://nos.nl/artikel/2164422-erdogan-waarschuwt-europeanen-jullie-zullen-niet-veilig-zijn.html
@Iberi, idd Freemason Erdogan, vanhu vazhinji vari kutamba zvakare zvakare. Pike hondo inofanira uye ichauya ...
I1-2s pakati pe Freemasons haisi yekutanga ... Apo Rutte achikwereta kubatsira munguva yekusarudzwa, Erdo akatarisira kutarisa, saka hama pachavo
kwete akanyora kuti:
Ndakanga ndichiri kushamisika kana 18 March izuva rinokosha?
Makore 3 apfuura musi wa22 March kwaiva nekurwiswa kweZaventem. Apo ndaida kutarisa kumashure musi iwoyo, ndakawana nyaya inotevera isina kujeka pamusoro pekurwa ikoko:
Kwete RTL Bertelsmann AG, Tanis akazviita panzvimbo yeAIVD iyo inopika kuvimbika kuna Willy
Imwe nyanzvi inokosha yeMuslim inotaura kuti chii chiri kuitika munyika yose ine chokuita nekumhanya-kusvika kuhondo yepasi rose ye3 uye inoti Istanbul (Constantinople) ichaita basa rinokosha mune izvi. Gurai uye mutongi saizvozvo .. tarisira izvo zvavanouya nazvo musi weChishanu 22e, Tower Bridge, West Coast USA? Ndiani achati ..
Saka iyo inoshanda zvakanaka, eh, Trollongren, hauoni kuti vashandi vehurumende vane zvakanakisisa kune vanorohwa ..?
"CTIVD yakatumira chikumbiro kuImba yeVamiririri munaNovember kuti ionewo uye inokurukura ruzivo rwehupfumi rwehurumende runoparadzirwa pakati penyika. Nokudzikisa zvakavanzika, vatariri vechishanu vanoda kuwedzera kuongorora kwavo mabasa epachivande. "
Ndinofanira kuseka pazvo sokunge kana masimba ekuchengetedza ari kuratidza kumashure kwemirimi yavo kune 'vatariri' uye KUVATIDZI. Mukuwedzera, 'vatariri' havadi kuziva zvose nokuti ivo vanove vanoziva zvemhosva uye vanozove vakanyatsopomerwa mumhosva, etc. Ndiani anotonga 'vatariri'? Puppet show.
mb. akanyora kuti:
Zvakare, chirongwa chekubhadhara mari:
Marjoram akanyora kuti:
Wakamboona here kuti munhu uyu mukomana nechiyero cheminwe yake? Transgender vanhu vose
Zvishoma zvishoma ndebvu mavara (photo parool)
Manuel Chaguaceda akanyora kuti:
Kunyatsotsvaga kuongororwa, asi ngatitangei nekushivirira kumirira 'chikwata chimwechete' 😉
"Tizai motokari" yaibva kune imwe nhanho yezvakaipa! ndiani anokanganisa anotiza kunyora tsamba ku "hama"? zvino mutadzi anobhadhara chikwereti nefoni ye "shamwari"?
Dzimwe nguva iwe hausati wava kuziva kana chimwe chinhu chiitiko. Raid Trumanlaan. Mutungamiriri weAmerica kana Trumanshow? Kurwisa musikiti munaKristuchurch. Mosque naKristu Church?
Ndinokutendai zvikuru, kunyange zvazvo zvikwangwani zvinowanikwa zvakanyanyisa mvura
kuongorora kunofadza zvakawanda uye Media / Power inotya, miniti 18, 35 haigoni kujekesa
Magandanga anoedza kuuraya vanhu vakawanda sezvinobvira anowanzotaurwa. Uyu gandanga akawira munzvimbo yakanyarara, kwausingadi kutarisira. Zvinoshamisa kuti havatambi pamusana pekuzvikudza kweGay, Zuva Rokuyeuka kana Zuva raMambo somuenzaniso. Sehugandanga chaiyo iwe waizoita zviito zvako mukati mevanhu vazhinji. Kungofanana neChirangaridzo CheDhipatimendi, iwe unofamba nayo seNew Zealand psyop. Uye kunyange kana iwe uchipikisa vanhu seIYO, sei iwe usingatore simba renyukireya? Putika nekuchengeteka, kutora umwe mushandi anotanga mararamiro anoita kana kushandiswa kwechigadziro ichocho. Zviri pachena kuti vakaita izvozvo nemapipi emafuta, asi izvi zvinogonawo kumakumbo e-high-voltage pylons uye kushandiswa kwakafanana neNuon. Asi zvese kamwe kamwe hazviitiki. Penguva yezororo rakadaro, zvingabva zvashandura kuva mhirizhonga isingadzorwi, ivo vanofanira kuramba vari kutonga zvimwe zvisingazoitiki sezvakarongwa.
Zvinosuruvarisa, izvo zvinongochengetwa kune mhuri chaiyo ... tsika mumhimberiki
okay akanyora kuti:
Chinondirova ini icho chiduku zvikuru chinonyatsozivikanwa pamusoro pevarwere. Kunyange mapepanhau akanyora kunyora pamusoro pazvo. Pane imwe muenzaniso yakanga ichangobva kufa uye imwe nyaya yakanyorwa pamusoro pezuva rimwe nerimwe, hapana chakanyorwa pamusoro pe "vakaurayiwa". 1 yaro ndeye 19 wemakore-roos Roos Verschuur .. Asi kana ini Google zita iri, ndinowana hake chero ruzivo pamusoro pake. Iwe unogona kutarisira kuti anonzi 19 ane makore ane makore akaberekerwa uye akakwidziridzwa munguva yemazuva ano anoshanda paSocial Media. Hapana nhoroondo ye Facebook, hapana sarudzo inoshandiswa, hapana nhoroondo yechinyorwa. Mifananidzo chete yaunoona paGoogle ndiyo iyo mapepanhau akashandisa.
Hapana vasikana vanoisa chinyorwa chekubatana naye pamwe nemagwaro akadai sekuti Ini ndichakusiya iwe, nezvimwewo.
kana ini ndichitsvaga zvakashata. Asi nyaya iyi inonhuwa pamativi ose.
Kwete iwe unotarisa zvakanaka. Asi hazvina basa nekuti vanhu vanopomerwa nemifananidzo uye mifananidzo pamusoro pevanhu vanoisa maruva uye rwendo runyararire (apo nzira dzose dzekufambisa dzakapfigwa .. mifananidzo inogona kuwedzererwa kuwanda kwekuwedzera kwevanhu software .. ndiani angayitsvaga)
Zvinofanira kuonekwa kuti iyi iri pamba-jindu-uye-kicheni software iyo munhu wese anogona kukwanisa uye kutora nemaawa mashomanana ekuita. John de Mol (ANP) zvechokwadi ane chimwe chinhu chiri nani pane zvaanogona:
Chiitiko chainzi izvo zvinonzi kurwiswa muAmsterdam ..
Zvaunonyora ndezvechokwadi. Zvinosuruvarisa nemafungiro akazvimirira ekufunga kwevadudzi veDutchman. Inyika ipi. Chii chavari kuita.
Hare akanyora kuti:
Yaiva pane imwe nzvimbo, mumaonero aAA, kuti yaiva "kunze kwekuremekedzwa" kune vakaurayiwa?
Saka isu hatigoni kuziva kuti chii, saka hatigone kuongorora kana iripo chaizvoizvo?
gronz23 akanyora kuti:
Zita rake ndiMelanie (AD), ivo vanotaurawo here? Kuita chimwe chinhu chisina kujeka pamusoro pomunhu, uyo zvino anofungidzirwa kuti anonyatsoita searipo mushure mekunge achinyunyuta. Imwe Martje Foundation yakabvisa mhando dzose dzemashoko (iyo yandakataura kune mutungamiriri weheyo, baba vake chaivo) ... mumwe mukadzi akataura pamusoro pehanzvadzi naamai vaRoos avo vaizovawo. Ane mhuri yakanaka, saka 'muvakidzani anoronga zvinhu zvose'. Dirk Kleppe (mutungamiri) nemugovera wemugovera René Werner vakamboita semupi wezvemari .. Baba René Verschuur vane FB asi chete 1 imwe Verschuur, amai vanonzi Lenie, vasinawo mamwe maProchuchu. Mufananidzo wekupedzisira baba nemwanasikana unobva ku2014 ....
Zvakanaka, sei mutemo we "wega wega" unogamuchirwa? Kwete kuchengetedza vagari venyika asi kuitira kuti hurumende inogona kuchengeta zvakanyanya sezvazvinofadza zvakavanzika kubva kuvanhu vese vanoita izvo hurumende iri kuita.
Ndinoona kuti munhu wacho, saka ndinomudana, akabhadhara gweta rinowanzopomerwa. Ndezvipi zvavanoziva kuti vangawanepi kuitira kuti script ienderere mberi?
« Anopomerwa mutadzi Gökmen Tanis akasungwa, zvichida mutambo wemhuri
Thierry Baudet Forum for Democracy (FvD) "Chikora cheMinerva chinoparadzira mapapiro ayo" »
Total Visits: 11.587.664
Iyo inofungidzirwa foramu for Democracy (FvD) tsananguro
5G ine njodzi sei uye yakaiswa muchivande sei
Iyo muraraungu inomiririra chinamato chakanyanyisa ivo vatsigiri vachifunga kuti vari kurwira 'kusiana uye kubatanidzwa'
Nei iyo transgender inova tsika itsva yeiyo 21 yezana uye iye murume nomurume vanonyangarika
Jeffrey Epstein anozviuraya muchitokisi chake (update)
bartelo op Iyo muraraungu inomiririra chinamato chakanyanyisa ivo vatsigiri vachifunga kuti vari kurwira 'kusiana uye kubatanidzwa'
Danny op 5G ine njodzi sei uye yakaiswa muchivande sei
Martin Vrijland op Iyo muraraungu inomiririra chinamato chakanyanyisa ivo vatsigiri vachifunga kuti vari kurwira 'kusiana uye kubatanidzwa'
guppy op 5G ine njodzi sei uye yakaiswa muchivande sei
Itai 1.611 vamwe vanyori